दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तर्देशीय पाइपलाइन उद्घाटन
अमलेखगञ्ज, भदौ २५
दक्षिण एसियाकै पहिलो नेपाल–भारत अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको मंगलबार उद्घाटन गरिएको छ । नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा र भारतबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत एकै समयमा स्विच थिचेर दुई देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको ६९ दशमलव सात किमि लामो मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रेलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गरिएको हो । मोदीले भारतबाट पठाएको तेल ओलीले सिंहदरबारमा स्विच थिचेर ‘रिसिभ’ गरेपछि अमलेखगञ्ज डिपोमा बट्टामा तेल थापेर नेपाल आयल निगमको ट्यांकीमा जम्मा गरिएको थियो ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेसँगै इन्धन आपूर्ति नियमित हुने नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्ज डिपोका प्रमुख प्रदिप यादवले जानकारी दिए । भारतको पटनाबाट मोतिहारी हुँदै नेपालको अमलेखगञ्जसम्म कुल २५९.७ किलोमिटरमध्ये नवनिर्मित मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको ६९.७ किमि लामो पाइपलाइनबाट पहिलो चरणमा ३१ लाख लिटर डिजल पठाएर गत साउन ३ गते गरिएको परीक्षण सफल भएको थियो ।
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको कुल बजेट २ सय ७५ करोड भारतीय रकम रहेको र त्यसमध्ये २ सय करोड भारतीय आयल निगमले व्यहोरेको छ भने ७५ करोड नेपाल आयल निगमले व्यहोरेको क्षेत्रीय प्रमुख इन्जिनियर यादवले जानकारी दिए । भारतको मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्म ३२.७८ कि.मि. रहेको छ भने रक्सौल सिमानादेखि अमलेखगञ्जसम्म ३६.२८ कि.मि. पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ । १०.७५ इन्चको डायमिटर रहेको उक्त पाइपमा १ घण्टामा २ सय लिटर पेट्रोलियम पदार्थ आउने उनले बताए ।
पाइपलाइनमार्फत पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेललगायतका पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सके पनि हालको समयको लागि डिजेल मात्रै ल्याउने निगमको अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख यादवले बताए । यादवले पेट्रोल र मट्टीतेलको खपत कम र व्यवस्थापन नभएकोले डिजेल ल्याउने बताए । पाइपलाइनबाट नियमित रुपमा दैनिक २० घण्टा सञ्चालन हुँदा दैनिक ३० हजार किलोलिटर तेल भित्र्याउन सकिने निगमले जनाएको छ । पाइपलाइनबाट हालका लागि डिजल मात्रै आयात गरिने र पेट्रोल आयात गर्न थप एक वर्ष लाग्न सक्ने उनले जानकारी दिए । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी ढुवानी खर्च बचत हुने निगमले जनाएको छ ।
इन्धनको मूल्य घट्यो :- पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै इन्धन ढुवानी लागतको न्यूनीकरणले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्यसमेत घटेको छ । मंगलबार मध्याह्नदेखि लागू हुने गरी निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर दुई–दुई रुपैयाँ घटाएको छ । देशभित्र खपत हुने डिजेलमध्ये ७० प्रतिशत अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको निगमले जनाएको छ ।
यो पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो ‘क्रस बोर्डर’ परियोजना हो । परियोजनाको उद्घाटनका क्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशकसहितको उच्च प्राविधिक टोली अमलेखगञ्ज पुगेको थियो । निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माणका लागि सन् २००४ मा सम्झौता भएको थियो । सो परियोजना विविध कारणले एक दशकभन्दा बढी समय रोकिएर रहेको थियो ।
सन् २०१५ को अगष्टमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र उनका भारतीय समकक्षी धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेसँगै परियोजना निर्माण सुरु भएको थियो । सो परियोजना निर्माणमा नेपाल र भारत सरकारले अत्यन्त चासो व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा पाइपलाइन परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।